Madaxweyne Gaas oo Xaflad Soo Dhowayn Ah Loo Sameeyey Oslo-Sawiro • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Madaxweyne Gaas oo Xaflad Soo Dhowayn Ah Loo Sameeyey Oslo-Sawiro
May 17, 2017 - By: Cumar Mohamed
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti balaaran oo uu hogaaminayo oo maalmahan socdaal ku marayay Qaarada Yurub ayaa xalay loogu sameeyey xaflad soo dhoweyn ah magaalada Oslo ee caasimada dalka Norwey.
Xafladan oo ay soo qabanqaabiyeen Jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Puntland waxaa ka soo qaybgalay Gudoomiyayaasha jaaliyadaha iyo wakiilada Dawladda Puntland ee dalalka, Denmark, Finland, Belgium iyo dalakaasi Norwey oo marti loo ahaa, waxaa kaloo ka soo qaybgalay boqolaal dadweyne ah oo isugu jiray rag iyo dumar.
Fanaaniinta reer Norwey ayaa heeso kala duwan ku soo dhaweeyay Madaxweynaha Puntland iyo waftiga u hogaaminayay iyo weliba bahda saxaafada oo iyagu si toos ah u tibinasay barnaamijkii iyo maamuuskii ay xanbaarsanayd xafladii xalay ka dhacday magaalada Oslo.
Intii ay socoto Xafladu Waa khudbado kooban halkaasi ka soo jeediyay Wasiiro, Xildhibaano, odayaasha dhaqanka, culimada, aqoonyahanda, siyaasiyiin, ururada dhalinyarada, ururada haweenka, iyo siyaasiyiin ka tirsan ururada siyaasadeed ee dalka Norwey, kuwasoo dhamaantood si isku mida uga hadlay adkaynta amniga iyo horumarinta Puntland iyo sidii DawladdaPuntland loogala shaqayn lahaa siyaasada ku aadan maalgashiga iyo dhisida kaabayaasha dhaqaalaha Puntland ee hawsheedu sida baaxada leh usocdo.
Gabagabadii, Madaxweynaha dowladda Puntland wuxuu ku booriyay Jaaliyadda reer Puntland ee Qaarada yurub inay dedaadaalaan, kana qaybqaataan horumarka ka socda Soomaaliya. Waxaa kaloo uu kula dardaarmay in caruurtooda ay dalka keenaan oo dhaqanka iyo diinta baraan.